June 28, 2020 - Khitalin Media
ပိုက်ဆံကို သုံးသင့်တဲ့နေရာ ( ၅ ) မျိုး နဲ့ မသုံးသင့်တဲ့နေရာ( ၅ ) မျိုး
June 28, 2020 Khitalin Media 0
ပိုက်ဆံကို သုံးသင့်တဲ့နေရာ ( ၅ ) မျိုး နဲ့ မသုံးသင့်တဲ့နေရာ( ၅ ) မျိုး ပိုက်ဆံဟာ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ်အရာပါ။ အမြဲတမ်းသုံးစွဲနေရတဲ့ ဒီပိုက်ဆံကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ပေါ်သမျှအသစ်အသစ်သော အရာတွေကို ဝယ်ယူရင်း သင်ဟာ […]
ခဏခဏ သန့်ရှင်းရေး မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အစိတ်အပိုင်း (၆) နေရာ… (အရေးကြီးလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)
မကြာခဏ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ၆ နေရာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်းနေရာတွေက မကြာခဏ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒိနေရာတွေကို လုံးဝ (သို့မဟုတ်) အကြိမ်ရေ အနည်းဆုံးသာ ဆေးကြောပေးပါ။ ၁။ နား အမှန်တကယ်အားဖြင့် နားအတွင်းမှာရှိတဲ့ နဖားချေးတွေက အညစ်အကြေးနှင့် အပျက်အစီးများကို […]
မွနျမာ့ ဂဏနျးသခငြ်ျာမှာ ကုဋေ ပွီးရငျ ဘာလာလဲ မသိသေးသူမြားအတှကျ
ကုဋေ ပြီးရင် ဘာလာလဲ။ ခု ၊ ဆယ် ၊ ရာ ၊ ထောင် ၊ သောင်း ၊ သိန်း ၊ သန်း ၊ ကုဋေ ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုခဲ့ကြဖူးတယ်။ ကုဋေ ပြီးရင် အစဉ်လိုက်လာတဲ့ […]
မဇာခြည်မြင့်မြတ်၏ နောက်ဆုံးဆေးရုံစစ်ဆေးချက်အဖြေအရ အဆိုပါမိန်းကလေးသည် ဦးဏှောက်အနောက်ဘက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း…. ခြေကျိုးခြင်း နှင့် တောင်ပေါ်မှပြုတ်ကျသည့်အရှိန်ကြောင့် အတွင်းဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရရှိထားမှုကြောင့်သာဆုံးပါးသွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိန်းကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားသို့ စစ်ဆေးပြုလုပ်ချက်အရ အခြားသော/မသမာသော ထိခိုက်မှုမျိုးတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။ မဇာခြည်မြင့်မြတ်သေဆုံးရခြင်းသည် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြုလုပ်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။(အခြားသောထင်မြင်ယူဆ/စွပ်စွဲချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ)။ ယခု case အား ဒီpost မှာသာအဆုံးသတ်ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ #ညီမလေးဘဝဆက်တိုင်းငြိမ်းအေးပါစေ #မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းစွာဖြင့် …..ဆရာလုံး unicode မဇာခွညျမွငျ့မွတျ၏ […]
သွေးကင်ဆာကို ပျောက်ကင်းခဲ့သူရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေးတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်.. မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေတို့ရေ။ ရှားစောင်း လက်ပတ် ရဲ့လက်တွေ့ အကျိူး ကျွန်မ ၁၅နှစ်သမီးက သွေးကင်ဆာနဲ့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါတယ် ၁နှစ်နီးပါး မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာ ဆေး ကုသမှုခံ ယူခဲ့တယ် ။ ဆေးရုံက ဆင်း တော့ လဲ […]
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးရဲ့ ဖခင်ပြောပြလာတဲ့ (ရုပ်သံ)
ယုံလဲမယုံဖူး..ဘယ်လိုမှလဲ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး.. မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါအရမ်းလဲလွမ်းနေတယ်နော်..ဘယ်လိုမှ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး….. ယုံလဲမယုံဖူး…ညီမလေးနဲ့ တူတူနေမယ်ဆို…စားချင်တာလဲ ချက်ကျွေးမယ်ဆို မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေလဲ လိုက်ပို့ ပေးမယ်ဆို… မရီး အမေကို ဂရုစိုက်ပေးဆို….နောက်လဲ ဘယ်သွားသွား တူတူသွားကြမယ်ဆို…အခုတော့ ဘာဖြစ်လို့ထားသွားတာလဲ…. အဲ့လိုမှန်းသိရင် ညီမလေး […]
အမျိုးသမီးများတွင်ရှိသော ထင်ရှားသောမှဲ့(၇)မျိုး ရတနာဆံကျစ်လို့ခေါ်တဲ့မှဲ့ရယ်… ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ်…. ဘယ်ဘက်မျက်ရည်ခံမှဲ့(ညာရယ်)နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်…. ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်စံပယ်တင်(ညာဘက်)မှဲ့ရယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်အထင်ကရမှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်….။ အဲဒီမှာရင်ဘတ်အလယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို၇တနာရွှေအိုးလို့ခေါ်တယ်…. အဲဒီမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာလေ့ရှိတယ်….နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားတတ်တယ်…. နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာအလုပ်ဌာနတွေမှာအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်….သူတို့တွေဟာဆင်းရဲရင်လဲ ခနပဲဆင်းရဲတွင်းတဲကျနေရင်လည်းခနပဲ …. မုချကြီးပွားချမ်းသာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်….အဲဒီလို၇တနာရွှေအိုးမှဲ့ပါနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျော်နီပတ္တမြားစိန်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကိုလက်သူကြွယ်မှာ ၀တ်ဆင်ထားရင်ထူးထူးခြားခြားကံမြင့်မားမယ်… နောက်တစ်ခုက နဖူးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကိုကျတော့ ရတနာဆီမီးထွန်းလို့ခေါ်တယ်…. အဲဒီလိုမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာကြတယ်….အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ကြတယ်…. နောက်ပြီး သားကောင်းသမီးကောင်တွေထွန်းကားကြတယ်….ပြောရရင်တော့ […]
အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပုံတွေကို လိုက်မန့်ပီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကို ဒေါက်တာမြဝတ်ရည် ဒဲ့ရှင်းပြီ(ရုပ်သံ)
ထက်မြက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလေ့ရှိတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။ ဒေါက်မြဝတ်ရည်ကတော့ လက်ထပ်ပွဲအတွက် (၆) လလောက်အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပေမဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးနဲ့တည့်တည့်တိုးပြီးတော့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုသာ ခမ်းခမ်းနားနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်တို့စုံတွဲကတော့ မေလ(၂၇)ရက်နေ့မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာတို့လင်မယားရဲ့ page နဲ့အကောင့်တွေအောက်မှာ အရင်ကရည်းစားဟောင်းပုံနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကို အကောင့်တုတွေနဲ့လိုက်မန့်နေကြတာပါ လင်မယားကြားစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိယုတ်မာနေကြတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ရည်းစားဟောင်းရှိကြစမြဲပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာသွားကြပြီး အိမ်ထောင်ကိုယ်စီကျနေတဲ့အချိန်မှာ […]
ယုံလဲမယုံဖူး..ဘယ်လိုမှလဲ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး.. မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ…
မကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ… အရမ်းလဲလွမ်းနေတယ်နော်..ဘယ်လိုမှ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး….. ယုံလဲမယုံဖူး…ညီမလေးနဲ့ တူတူနေမယ်ဆို…စားချင်တာလဲ ချက်ကျွေးမယ်ဆို မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေလဲ လိုက်ပို့ ပေးမယ်ဆို… မရီး အမေကို ဂရုစိုက်ပေးဆို….နောက်လဲ ဘယ်သွားသွား တူတူသွားကြမယ်ဆို…အခုတော့ ဘာဖြစ်လို့ထားသွားတာလဲ…. အဲ့လိုမှန်းသိရင် ညီမလေး လဲ လိုက်ခဲ့ ပါတယ်…. အခုတော့…….. မကြီး…အဆင်ပြေအောင်နေနော်… […]
လာမည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် အောက်ပါထီလက်မှတ်များမထိုးမိစေရန် ” ထီ “လက်မှတ် သတိပေးချက်…
တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ ထီလက်မှတ် သတိပေးချက် မသန်စွမ်း ထီသည် ဦးမျိုးမင်းသည် ယနေ့ ၂၇.၆.၂၀၂၀ မနက် ၉နာရီ ၁၀မိနစ် အချိန်ခန့်က ထီရောင်းချရာ ထီထိုးသူ ကိုထွန်းသည် ထီ အစောင် ၈၀ ကိုထိုးပြီး ဂိတ်မှာ ပိုက်ဆံ ကျန်ခဲ့လို ပြောပြီး ထီများ ယူသွားပါသည် […]